Fomba 7 handefasana mailaka finday tsy mahomby | Martech Zone
Fomba 7 handefasana mailaka finday tsy mahomby
Alakamisy Oktobra Oktobra 3, 2013 Alakamisy Oktobra Oktobra 3, 2013 Douglas Karr
Ny antontan'isa ReachMail dia mampiseho fa maherin'ny 40% ny mailaka nosokafana amin'ny finday. Mijery mailaka amin'ny findaiko mandritra ny tontolo andro aho mba hahafahako mahazo ireo mailaka izay manandanja indrindra. Maro amin'ireo mailaka hesoriko no voajanahary ara-barotra ary tsy voavaky amin'ny iPhone. Raha tokony hiezaka ny hanao zoma na hiova endrika maodely aho dia hamafana azy ireo fotsiny. Na izany aza, rehefa tonga any amin'ny mailaka manana endritsoratra mahafinaritra sy fisie madio aho, dia matetika mandany fotoana aho ary mamakivaky azy io.
ReachMail dia mitondra anao ny Infographic momba izay tokony hialana amin'ny fampielezana finday Fomba 7 hanaovana fampielezana mailaka finday tsy mahomby.
Niova ny fitondran-tena tamin'ny alàlan'ny mailaka finday sy ny fotoanan'ireo mpivarotra mailaka nampiditra fomba fanao tsara indrindra mba hahazoana antoka fa azo vakina, mifandraika ary omen'ny mpanjifan'izy ireo mailaka. Na inona na inona bitika indrindra dia toa hitako ihany ny bokotra tsy hisoratra anarana amin'ny findaiko rehefa tsy mifanaraka amin'ny zavatra antenaiko ny mailaka.
Tags: famolavolana mailakamailaka findayfamolavolana mailaka findaycontactmail
8 Okt 2013 amin'ny 12:22 PM
Sary tsara momba ny lahatsoratra sy fampahalalana satria tonga amin'ny toerana mety rehetra! raha aseho amin'ny "négatif" ity ity dia tena miasa tsara amin'ny famaritana ireo talen-tsekoly fototra tokony hataonao.